Hotel Pyin Oo Lwin ,Review - LODGGY
အေးချမ်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပြင်ဦးလွင်ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ အပြည့်အဝရရှိစေမယ့် ပြင်ဦးလွင်မြို့က ဟိုတယ်ပြင်ဦးလွင်အကြောင်းလေး ဟိုတယ် Review အနေနဲ့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ကန်တော်ကြီးဥယျာဉ်နဲ့ အနီးဆုံးဟိုတယ်တွေထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဟိုတယ်က ကန်တော်ကြီးသွားတဲ့လမ်းပေါ်မှာရှိပြီး ကန်တော်ကြီးမရောက်ခင် အကွေ့လေးနားရောက်ရင် ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာရှိတာပါ။ ဟိုတယ်ကနေ ကန်တော်ကြီးအမျိုးသားရုက္ခဗေဒ ဥယျာဉ်ကို ၅ မိနစ်၊ ပြင်ဦးလွင်မြို့ထဲကိုတော့ ကားနဲ့ ၁၀ မိနစ်လောက်ပါပဲ။
Reception အတွင်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ပြင်ဦးလွင်က အိမ်အကြီးကြီးတစ်ခုထဲရောက်သွားသလို ခံစားရတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်က အသုံးအဆောင်တစ်ချို့ရယ် ခေတ်မှီအပြင်အဆင်တွေနဲ့ ရောယှက်ပြီး ပြင်ဆင်ထားတာ လှပါတယ်။ ဟိုတယ်ခြံဝန်းထဲမှာတော့ ထင်းရှုးပင်၊ ပန်းပင်တွေ အုပ်အုပ်ဆိုင်းဆိုင်းနဲ့မို့ အေးအေးချမ်းချမ်းရှိပြီး လမ်းအနိမ့်အမြင့်တွေဘေးမှာ သစ်သားအိမ်ဘန်ဂလိုလေးတွေ အစီအရီနဲ့ တည်ဆောက်ထားတာပါ။ ခြံဝန်းထဲမှာလည်း ပြင်ဦးလွင်နာရီစင်၊ ရေတံခွန်၊ ရေကန်ပေါ်မှာ သစ်သားတံတားလေးတွေနဲ့ အလှဆင်ထားပါသေးတယ်။ Spa, Gym, Bar နဲ့ ရေကူးကန်လည်းရှိပြီး ရေကူးကန်ကိုတော့ အမိုးလေးနဲ့လုပ်ပေးထားတော့ ရာသီဥတုသိပ်မကောင်းတဲ့ အချိန်တွေမှာလည်း ကူးလို့အဆင်ပြေပါတယ်။ နောက်ထပ်သဘောကျတာတစ်ခုက ဘားနဲ့ကပ်ရပ်မှာ စာကြည့်တိုက်ငယ်လေး ဖန်တီးပေးထားတာကိုပါ။
Pool but not pool
Deluxe အခန်းမှာတည်းဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဘန်ဂလိုအခန်းမှာ ရှုခင်းကြည့်ဖို့အတွက် Patio လေးထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားပြီး အခန်းထဲဝင်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်အိမ်ရောက်နေသလိုလေးခံစားမိစေတာကတော့ သဘောကျစရာပါ။ တစ်အိမ်လုံး အခန်းနံရံ ကြမ်းခင်းနဲ့ ပရိဘောဂပစ္စည်းတွေကို သစ်သားတွေပဲ သုံးထားပြီး မှန်ပြတင်းတွေကိုလည်း အကြီးကြီးတွေသုံးထားပါတယ်။ ပြတင်းပေါက်ဘေးမှာလည်း ဆိုဖာထိုင်ခုံလေးတွေနဲ့။ မီးလင်းဖိုလေး ထည့်သွင်းဆောက်လုပ်ထားတာကလည်း တောင်ပေါ်အငွေ့အသက်တွေကို ပိုရစေပါတယ်။ အကြိုက်ဆုံးကတော့ မီးဖိုဆောင်ပုံစံနဲ့ ဘားကောင်တာတစ်ခုထည့်ပေးထားတာပါပဲ။ အရက်၊ ဝိုင်၊ ဘီယာ အစုံတင်ပေးထားတယ်။ အသုံးအဆောင်တွေက ခေတ်မှီနေသလို အခန်းတွင်းဖွဲ့စည်းထားပုံက ကိုလိုနီခေတ်အိမ်လေးထဲရောက်နေသလို ခံစားမှုမျိုးလည်း ရပါတယ်။
မိုးတွင်းလူပါးတဲ့အချိန်ဆိုပေမယ့် ဘူဖေးမနက်စာကျွေးပါတယ်။ စားသောက်ခန်းအပြင်အဆင်လေးကလည်း ချစ်စရာလေး။ မနက်စာကို အဖြစ်ကျွေးတာမဟုတ်ပဲ သေသေချာချာ မခိုမကပ် ထည့်ပေးပြင်ပေးတာ သဘောကျစရာပါပဲ။ ဟိုတယ်က Feel Group အောက်မှာရှိတာမို့လို့ထင်တယ် အစားအသောက်လက်ရာကတော့ ပြောစရာမရှိအောင်ကောင်းပါတယ်။ တစ်ခုပဲပြောစရာရှိတာက ဟိုတယ်ကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ဆိုရင် ရွေးချယ်စရာနည်းတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ကန်တော်ကြီးကိုတော့ လမ်းလျှောက်သွားလို့ရအောင်နီးပါတယ်။ ပန်းတော်ဝင် စားသောက်ဆိုင်၊ The Taj အိန္ဒိယ စားသောက်ဆိုင်တို့ကိုလည်း နီးနီးလေးပါပဲ။
သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေသလို ဟိုတယ်မှာပဲ အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ အနားယူအပန်းဖြေချင်သူတွေအတွက် အဆင်ပြေတဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုပါပဲ။
လိပ်စာ (Address) – No.9, Nanda Road, Pyin Oo Lwin. Myanmar.
Lodggy ရဲ့ပထမဆုံး Mobile App ကနေ မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ ဟိုတယ် ၅၀၀ ကျော် ကိုရှာဖွေနိုင်ပါပြီ။ Download Android : http://bit.ly/2G7mahw
Lodggy နဲ့ဘွတ်ကင်တင်ဖို့ 09 4444 38366 ကိုဆက်သွယ်လိုက်ပါ…